राप्ती नगरपालिका–२ गड्यौली मिलन टोलका युवा वैज्ञानिकका नामले समेत चिनिने गरेका सरोज चेपांगले विद्युतीय कार बनाइरहेका छन्। सरोजले पेट्रोलबाट चल्ने कारलाई परिबर्तन गरि बिद्युतबाट चार्ज गरि चलाउन मिल्ने बिद्युतिय कार बनाइरहेका हुन्। यस अघि उनले एक सिटको प्यारामोटर निर्माण गरेका थिए, जसको सफल परीक्षण समेत भएको थियो। चितवन गड्यौलीका होनहार प्रतिभा बोकेका सरोज चेपांगले अहिले विद्युतीय कार र प्यारामोटर बनाउन व्यस्त छन्।
सरोज चेपाङ्गले २ वर्ष अघि राप्ती नदी किनारमा उनि आफैले निर्माण गरेको प्यारामोटरको सफल परीक्षण गरेका थिए। तेस्को सफलता पछि सरोजले अहिले विद्युतीय कार निर्माण गरिरहेका हुन् । उनले चालक सहित ५ जनाको क्षमता भएको पेट्रोलबाट चल्ने कारलाई परिवर्तन गरी विद्युतीय चार्जबाट चल्ने कार बनाएका हुन् ।
उनले निर्माण गरिरहेको उक्त विद्युतीय कार ४ घण्टा चार्ज गरेपछि १ सय २० किलोमिटर चल्ने उनले दाबी गरेका छन । यस्तो नयाँ कार बनाउँदा १० लाखदेखि १२ लाखसम्म खर्च हुने उनले बताए । उनले सो गाडी परीक्षण पनि गरिसकेका छन् ।
उक्त कार संगै सरोजले अर्को ३ पांग्रे कार पनि बनाइरहेका छन्। जसमा २ जना मात्र चढ्न मिल्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रामेश्वर अधिकारीले अर्डर गरेकाले तीन पांग्रे कार बनाएको सरोजको भनाइ छ । उनले भिडियो मार्फत नै सबैलाई जानकारी दिदै यदी कसैलाई गाडिलाई इलेक्टि्क कार बनाउन चाहे सम्पर्क गर्न सक्ने भन्दै फेसबुक मार्फत जानकारी समेत दिएका छन्।
सरोज सहित डा. रामेश्वर अधिकारी, चिरञ्जिवी ओली, रोमान्च डल्लाकोटी र सन्तबहादुर चेपाङ मिलेर ‘सरोज चेपाङ परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र’ दर्ता गराएका छन् । प्यारामोटर बनाएर सफल परीक्षण गरेपछि उनलाई युवा वैज्ञानिकका रुपमा सम्मान गरिसकेको छ ।
Previous Article ईसेवाबाट स्मार्टको नम्बरमा टपअप गर्दा १ जीबी डेटा पाउन सकिने
Next Article सागर लम्साल ‘बले’ र रेश्मा घिमिरेको ‘तिमी बिजी टिकटकमा’ भिडियो सार्बजनिक ( भिडियो )